Yikuphi izikhungo zinengxenye ukulondolozwa esikhumbuzo kwamasiko? Kuyadingeka futhi izici eziyisisekelo
Izindaba Umphakathi, Isiko
Monuments of nakumasiko zidlala indima ebalulekile ezimpilweni zethu. Kuyinto ngabo, singakwazi ukubona kakhulu ngokujiya umlando kulokho kutadisha. Siphinde nethuba ukhondolo izizukulwane zethu, ukuthi uzobasiza ukucabanga kangcono isikhathi sethu, ngamasiko. Kodwa-ke kubalulekile ukwazi ukuthi iyiphi izikhungo bekwi ukulondolozwa esikhumbuzo kwamasiko.
Iphanorama yomoya womphakathi wethu kuhlanganisa izici eziningi. Kuhle kokusho ezinye izinhlobo zawo:
izakhiwo (amasonto, izinqaba, Manor izindlu, zezindela, izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu, izikhumbuzo, izindlu);
izinto zasendlini ;
yobuciko neyezandla (esemathuneni akudala, imifanekiso, imikhiqizo ehlukahlukene kusukela metal, indwangu, ukhuni).
Indlela isikhumbuzo of nakumasiko
Izimpawu yokunika iyiphi into noma into njengoba lesikhumbuzo kwamasiko ngokuvamile kunqunywa lezi zinto ezilandelayo:
Usuku kwendalo into. Lokhu kungaba unyaka ukwakhiwa, noma eseduze ngezikhathi ezithile ngosizo amathuluzi akhethekile.
Labo uphikisana kumbhali.
Ngenxa yokuba khona umcimbi zomlando.
Ngenxa yokuba khona iyiphi isibalo somphakathi.
Izenzo ezifana into nokuhlola letemukelekako bese kunikwa kuye isimo umphakathi wahlanganyela ukuvikelwa esikhumbuzo kwamasiko. Futhi ukwazi lapho izikhungo ehilelekile kulondolozwe amagugu amasiko, kubalulekile ukuba wonke umuntu.
Kubalulekile ukulondoloza nakumasiko
ezikhumbuzo kwamasiko kuwufanele ehlola ngemininingwane ukuthi kungani udinga ukuvikela ukubhujiswa ezemvelo (ie umthelela zangaphakathi nezangaphandle yizici zemvelo ukuthi musa kuxhomeke kumuntu), futhi uhlamvu yokufakelwa (umonakalo mechanical abangelwa izenzo zabantu). ukubhujiswa yobudedengu noma ngamabomu esikhumbuzo kuye kwaholela ekulahlekelweni eziningi amasiko. Oh ababekufunde kuphela kusuka izincwadi, izincwadi ezisemthethweni nezinganekwane achaza izenzakalo zangempela, kodwa kancane Wagcwalisa.
Ukuvikelwa esikhumbuzo kwamasiko kufanele kwenziwe yonke indawo mode avamile. Kodwa ngokuvamile ungabona kanjani noma yimaphi amasayithi ezibalulekile Ngishoné lwanyamalala, futhi ochwepheshe kuphela neyaziwayo namakhulu ambalwa eminyaka ngemva ukuthi izinto elahlekile babe nokuzuza okukhulu kwabantu isikhathi.
Yikuphi izikhungo zinengxenye ukulondolozwa esikhumbuzo kwamasiko?
Ukuvikelwa nakumasiko usuthandwa kuphela ngekhulu weshumi nesishiyagalombili. Peter mina wakhipha isimemezelo esikhethekile, futhi kuphela ngaleso sikhathi zaqala ukwamukelwa ukuvikela izikhumbuzo ezibalulekile kwamasiko. Kodwa ngenxa alingise isiko European izinto eziningi ezindala awaziswa, okufanayo kungashiwo bamabandla. Bona ezidiliziwe ngamanani amakhulu, isibonelo, ukunwetshwa edolobheni kanye nokwakhiwa amakhaya amasha. Kuphela ngaphansi Nicholas Ngangenqatshelwe ukubhujiswa kwezakhiwo.
Ngemva izinhlangano ekhethekile izikhumbuzo esikalini futhi evikelwe of nakumasiko kuye kwahlelwa indawo yokuzivikela. Kodwa ngesikhathi kulwiwa futhi ngesikhathi ngamazwi ashiwo wayengakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona ezombusazwe lachithwa izingosi eziningi ezibalulekile. Ezinye izindlu futhi ibandla kuphela esindiswa yokuthi iminyuziyamu ahlukahlukene sezisunguliwe kuzo.
Yikuphi izikhungo zinengxenye kulondolozwe nakumasiko manje? Okwamanje, inani nezinhlangano ezifana siyamangalisa. Kukhona okuningi workshop sokubuyiselwa, i-Institute for Cultural, Ucwaningo Scientific-Institute Zokubuyiselwa, ezihlukahlukene iminyuziyamu, njll
Konke kulezi zinhlangano ngokuyinhloko ukugcina, kubuyiselwe futhi sivikele isivele iyatholakala okwamanje. Futhi, kulezi zikhungo njalo efuna, eqonde kakhulu, namatshe ezikhumbuzo entsha kahle ukhohlwe noma ezilahlekile nakumasiko. Kulokhu, kunemibhalo yesandla ngisiziwe, asemthethweni, izithombe njengendlela yemvelo siqu, futhi kusukela emilandwini iminyuziyamu, izincwadi siqu, tindzaba letimfisha, izincwadi, imidwebo.
Midgets kanye dwarfs - kunomehluko!
Yini ehlukanisa Chinese kusukela Japanese? ukubukeka incazelo
Cavaliers Okugcwele Order "Ukuze Merit": uhlu
Cat Bonisa isheduli eMoscow. International Cat Show e-Moscow
Kazi kusho ukuthini ukuba indoda kwamasiko kanye ophucukile?
Umbuzo ovamile: indlela Roll up amabhange nge isikulufa osonhlamvukazi bodwa?
Kubaluleka Information Security: lokho kufanele wazi ukugwema ukuba isisulu imikhonyovu kolwazi zwe lanamuhla
Dysarthria ingane: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ukungqubuzana imvama enovelini "Obaba and Sons" nokulungiswa
Labantu Serbian: labantu, umlando, Ukwakheka yobuhlanga
Izinwele zihlale ziphephile kanjani? Izindawo zokuhlala kwazo, izici zokudla
Kanjani Photobackground izandla siqu: isigaba master, imibono ezithakazelisayo kanye nezincomo
Shortcrust khekhe: iresiphi zakudala ngesithombe
Yiziphi owodwa esigabeni amamitha kagesi futhi kanjani ukhetha idivaysi efanelekayo?
Ukufaka kubhayela kagesi owawusemzini womzalwane - imfundo. Ukushayela ukufakwa kubhayela kagesi
India V XVI: Sakhiwo Yangaphakathi